पैसा बचत गर्दा तपाईंले Swagbucks ब्राउजर विस्तार संग अनलाइन किनमेल प्लस एक मुफ्त $ 10 प्राप्त - स्वास्थ्य Rebates
घर » Freebies » पैसा बचत गर्नुहोस् जब तपाइँ अनलाइन प्लस पसल गर्नुहुन्छ Swagbucks ब्राउजर एक्स्टेन्सनको साथ एक निशुल्क $ 10 पाउनुहोस्
यदि तपाईं डेस्कटप कम्प्यूटरको साथ अनलाइन खरीद गर्नुहुन्छ भने, हामीसँग तपाईंको लागि उत्कृष्ट प्रस्ताव छ! यो स्वागबक्स ब्राउजर एक्सटेन्सन हो जुन तपाइँ गुगल क्रोम वा इन्टरनेट एक्सप्लोररको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
स्वागबक्स ब्राउजर एक्सटेन्सनको साथ, तपाई फिटनेस उत्पादनहरू र तपाईंको मनपर्ने अनलाइन भण्डारहरूमा सबै बचतहरू बचत गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै Amazon, eBay, Walmart, Target, आदि। तपाईले चयन गरिएका भण्डारहरूमा नकद फिर्ता पाउनुहुनेछ, विशेष कूपनहरू, र तपाइँले पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले साइन अप गर्दा एक निशुल्क $ 10 बोनस। यो स्वागाबक्स ब्राउजर एक्सटेन्सनको बारेमा सबै भन्दा राम्रो भाग हो कि यो 100% नि: शुल्क डाउनलोड गर्न को लागी यो सुनिश्चित गर्नुहोस् आज डाउनलोड गर्नुहोस् पैसा बचत गर्न र फिर्ता नगरी कमाई!
Swagbucks ब्राउजर एक्सटेन्सन सर्तहरू र शर्तहरू:
एक पटक तपाईं Swagbucks लागि साइन अप, तपाईं सदस्य आफ्नो खाता Swag अप खण्डको बोनस "सक्रिय" हुनुपर्छ। बोनस मान एसबी भनिन्छ, अंकहरूको रूपमा कमाईएको छ। एक 1000 एसबी बोनस प्राप्त गर्नुहोस्, जुन $ 10 मूल्यको बराबर हो, जब तपाईले कम्तीमा $ 25 खर्च गर्नुहुँदा स्वागबक्स / शपमा देखाइएको भण्डारमा। तपाईंले यो खरिदका लागि कम्तीमा 25 एसबी प्राप्त गर्नुपर्दछ, जुन तपाईंले 30 दर्ताको दिन भित्र भर्नु पर्छ। MyGiftCardsPlus.com र यात्रा खरिदहरू योग्य छैनन्।
कैश फिर्ता कमाउने थप तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ?
Swagbucks साथै, हामी पनि eBates लागि साइन अप साथै अझ स्टोर मा नि: शुल्क पैसा फिर्ता कमाउन सुझाव दिन्छौं। तपाईं यहाँ ई-मेलका लागि निःशुल्क साइन अप गर्न सक्नुहुनेछ eBates ले तपाईंलाई साइन अपका लागि निःशुल्क $ 10 पनि दिन्छ!